ပပဝတီနဲ့ ဥမ္မာဒန္တီရဲ့ အလှတွေပေါင်းစပ်ထားသလား အောက်မေ့ရပြီး မထိရက်မကိုင်ရက်အောင် လှလွန်းနိုင်တဲ့ဘောလီဘောမယ်လေး...! - Thadin
Homeအားကစားကဏ္ဍပပဝတီနဲ့ ဥမ္မာဒန္တီရဲ့ အလှတွေပေါင်းစပ်ထားသလား အောက်မေ့ရပြီး မထိရက်မကိုင်ရက်အောင် လှလွန်းနိုင်တဲ့ဘောလီဘောမယ်လေး…!
ပပဝတီနဲ့ ဥမ္မာဒန္တီရဲ့ အလှတွေပေါင်းစပ်ထားသလား အောက်မေ့ရပြီး မထိရက်မကိုင်ရက်အောင် လှလွန်းနိုင်တဲ့ဘောလီဘောမယ်လေး…!
March 9, 2019 Kay Kay အားကစားကဏ္ဍ Comments Off on ပပဝတီနဲ့ ဥမ္မာဒန္တီရဲ့ အလှတွေပေါင်းစပ်ထားသလား အောက်မေ့ရပြီး မထိရက်မကိုင်ရက်အောင် လှလွန်းနိုင်တဲ့ဘောလီဘောမယ်လေး…!
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမင်းသမီးတွေ မော်ဒယ်တွေမှ ချောတာလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကစားသမားတွေလဲ မော်ဒယ်တွေ ရှုံးလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ချောပါတယ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းသမီးတွေတောင်လက်မြှောက်အရှုံးပေးခဲ့ရသူလေးကတော့ ကာဇစ်စတန်လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့နာမည်ကတော့ sabina altynbekovaပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အနေနဲ့ မော်ဒယ်တွေရှုံးလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲလဲ သူမဝါသနာပါတဲ့ ဘောလီဘောမယ်ဘဝကို ရွေးချယ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရုပ်မလေးလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အလှအပေကြောင့် အာရှမှာ အလှပဆုံးအားကစားမယ်၅ယောက်မှာ သူမပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အလှပအကြောင့် ကြော်ငြာတွေ တီဗီစီးရီးတွေက အပြိုင်ကမ်းလှမ်းကြပေမဲ့ သူမကတော့သူမချစ်တဲ့ အားကစားကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တဈကမ်ဘာလုံးမှာမငျးသမီးတှေ မျောဒယျတှမှေ ခြောတာလာတာမဟုတျပါဘူး။ ကစားသမားတှလေဲ မျောဒယျတှေ ရှုံးလောကျတဲ့ ရုပျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ တဈကမ်ဘာလုံးက ခြောပါတယျလှပါတယျဆိုတဲ့ မငျးသမီးတှတေောငျလကျမွှောကျအရှုံးပေးခဲ့ရသူလေးကတော့ ကာဇဈစတနျလကျရှေးစငျ အမြိုးသမီးအသငျးရဲ့ ကစားသမားလေးပဲဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့နာမညျကတော့ sabina altynbekovaပဲ ဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အနနေဲ့ မျောဒယျတှရှေုံးလောကျတဲ့ ရုပျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားပမေဲလဲ သူမဝါသနာပါတဲ့ ဘောလီဘောမယျဘဝကို ရှေးခယျြထားသူဖွဈပါတယျ။ ကျောမရုပျမလေးလို ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ရုပျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးပဲဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ အလှအပကွေောငျ့ အာရှမှာ အလှပဆုံးအားကစားမယျ၅ယောကျမှာ သူမပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ အလှပအကွောငျ့ ကွျောငွာတှေ တီဗီစီးရီးတှကေ အပွိုငျကမျးလှမျးကွပမေဲ့ သူမကတော့သူမခဈြတဲ့ အားကစားကိုသာ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁၀လသားအရွယ်ကလေးကို ခြေသည်းညှပ်ပေးရာမှ ခြေမလေးပါ ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်…!
This Year : 234011
Total Users : 593035
Total views : 2721645